मेगा मुलाह Isis खेल प्रदायक द्वारा संचालित एक प्रगतिशील भिडियो स्लॉट खेल हो Microgaming। यो एक5रिल र 25 पेनलाइन रंगीन स्लॉट खेल हो जुन प्राचीन मिश्र विषय हो जुन सामान्य रूपमा अन्य स्लट गेमहरूमा पाइन्छ। यद्यपि यो अरु भन्दा धेरै खडा छ कि यो खेल नेटवर्क मा सबै भन्दा ठूलो प्रगतिशील खजाना खेल हो! त्यहाँ घर लिनको लागी 10 लाख भन्दा बढी खजाना पुरस्कार तयार छ।
मेगा मुलाह इस्इज मा4प्रगतिशील जैकपोट
खेल सुरू गर्नु अघि तपाईलाई आफ्नो शर्त समायोजन गर्न आवश्यक छ। तपाईंको शर्तको आकारबाट दायरा हुन सक्छ 0.01 देखि 0.05। मेगा मुलाह आईएसिसको स्क्याटर प्रतीक हल्क हो, र कम से कम3ल्यान्डिंग मा रील मा स्कैटर, नि: शुल्क स्पिन फीचर सक्रिय गरिएको छ।3हक्स 30 नि: शुल्क स्पिनहरू र 6x गुणक ट्रिगर गर्दछ। साथै, एक जीत को उडान मा, खेल तपाईंलाई जुआ फीचर प्रदान गर्दछ, यदि तपाईं कार्ड को सही रंग को अनुमान लगाए हो यदि तपाईं आफ्नो winnings डबल गर्न को लागी अनुमति दिछन। यदि तपाईं आफ्नो winnings को गुमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईं कार्डको सूट पनि सही गर्नु पर्छ। यसका साथ, खेलमा4प्रगतिशील ख्यातिहरू छन्, यो सबैभन्दा ठूलो एक यो मेगा जैकपोटमा 1,000,000 क्रेडिटहरू छन्।
मेगा मुलाह इस्ईस को सारांश
मेगा मुला इइस एक रोचक र आधुनिक स्लॉट गेम हो जुन तपाईले निश्चित रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ। खेलसँग 88% र एक मध्यम भिन्नताको RTP (प्लेयरमा रिटर्नमा) अनुपात छ। यदि मेगा मोहिया इस्इस तपाईंलाई आकर्षित गर्दैन, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले फल फटा फीट3रील प्रयास गर्नुहोला, किनकी यसले यसको लागि धेरै क्लासिक अपील छ। हामी तपाईंलाई आशा गर्दै छौ खेलाडी!
मेगा मोहम्मद छ अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 3, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 मेगा मोहम्मद छ
2.0.0.1 भाग्यशाली खरगोश लूट
2.0.0.4 बैटम्यान र राइडरले धन कमाएको छ
2.0.0.5 जंगली इच्छाहरु
2.0.0.6 सुपरमैन चलचित्र
2.0.0.7 हिलमा एक
2.0.0.8 जादुई मत्स्यस्कृत